Dhuumaha – Simulator-ka Tuubooyinka – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Dhuumaha – Simulator-ka Tuubooyinka – Khiyaamo&Hack
Waxaa qoray maamulka | Nofeembar 25, 2021
Tubooyinka waa jilbaha tubooyinka halkaas oo ay tahay inaad dhisto oo aad ku xidho dhammaan tuubooyinka nooca ciyaarta halxiraalaha. Waxaad tahay beeraleyda beertan zen ee dabacsan. Xir kala qaybinta oo ku xidh isha biyaha iyo dhirta. Diirada saar, naso, U ogolow beertaada inay koraan.
Geedi socodka beerista si fudud ayaa loop aan dhammaad lahayn oo ku qanacsan, abuur, biyo, kora oo ku celi. Tuubooyinka waxay rabeen inay ku celiyaan waayo-aragnimadan nasashada. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad taabato tuubada si aad u wareegto oo aad u maamusho si aad u toosiso socodka biyaha ee dhammaan tuubooyinka. Hubi inaad gaadho beerta oo dhan, il kasta oo biyo ah waa in ay quudisaa ugu yaraan hal geed, si loo isticmaalo biyaha siyaabaha ugu waxtarka badan ee suurtogalka ah.
Qashinka biyuhu maaha arrinta kaliya ee halkan; sidoo kale ma rabto inaad daadiso dhaqdhaqaaqyadaada sababtoo ah beertu waa jilicsan tahay oo sidaas oo kale ah, si aan dhammaad lahayn uma wareejin karno nidaamka dhuumaha, sidaas oo kale waxaad leedahay dhaqdhaqaaqyo xaddidan si aad ugu rakibto nidaamka waraabka ugu fiican si aad ugu ogolaato beertaada zen inay horumarto. Tani si fiican u samee beertaada zen ayaa kor u kici doonta oo waxay heli doontaa shahaadada ugu fiican.
Dhuumaha waa qayb ka mid ah magaca caanka ah ee Infinity Loop. Tani degan, ugu yar, iyo ciyaarta caqliga leh waxay kaa caawin doontaa inaad wax ka qabato welwelka iyo OCD, sida beer-falashada. Marka aad taabato tuubada kowaad, waxaad kor u qaadi doontaa feejignaantaada oo aad yarayn doontaa calaamad kasta oo walaac ama OCD. Ku gaadh khibrad nasasho buuxda leh beertaada zen ee gaarka ah.
Isku day inaad ku xidho inta jeer ee tubooyinka inta aad awooddo oo ku buuxi naftaada fikrado wanaagsan. Maskaxdaada u kori sidii inay tahay beertaada.
Ciyaar fudud: Kaliya taabo tubooyinka si aad u wareegto oo aad u abuurto wareegyada waraabka. Biyaha ayaa dhex qulquli doona marka aad abuurto isku xirka meelaha ay u dambeeyaan.
Nasasho:Ciyaartoyda leh arrimaha OCD waxay xusaan ciyaartan inay tahay hab fiican oo lagu helo fiicnaansho. Ciyaarta tubooyinka waa mid aad u degan - "kaliya tuubada tuubada" - iyo dhowr heerar maalintii ayaa ku filan inay la dagaallamaan OCD iyo arrimaha walaaca.. Waxay la mid tahay beertaada zen gaarka ah.
Maskaxda-xaqliga leh: Tuubooyinku waxay wataan jeex-jeex maskaxeed yar oo aan dhammaanayn kuwaas oo kor u qaadi doona xirfadahaaga macquulka ah, naftaada deji oo wanaaji feejignaantaada. Kori xirfadahaaga macquulka ah.
Ciyaarta caadiga ah: Si aad ah marka loo eego ciyaaraha kale ee macquulka ah sababtoo ah fududaantiisa, Tuubooyinku aad bay u qanacsan yihiin waxayna kobcin doonaan dhinaca hal-abuurka ee maskaxdaada.
Meel walba ku ciyaar:
Waxaad qaadan doontaa wax ka yar 20 ilbiriqsi si aad beer u waraabiso. Taasi waxay ku fiican tahay inaad ku ciyaarto baska ama markaad sugayso duulimaadkaaga garoonka diyaaradaha. Bilow ciyaarta oo ku naso meel kasta oo aad joogto!
Fikradda iyo Horumarka: Ciyaaraha Hezartoo iyo Infinity.
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Dhuumaha, Plumbing, Qabille
← Ka tuurista – Khiyaamo&Hack 456 Badbaadinta farsamada gacanta – Khiyaamo&Hack →